iOS 7 dia mamela antsika hifehy ny iPhone amin'ny fivezivezena amin'ny loha | Vaovao IPhone
Apple dia nanisy safidy vaovao ao amin'ny menio fidirana ao amin'ny iOS 7 izay mamela antsika mamela anao hifehy ny rafitra amin'ny fihetsiky ny loha.
Ny fitaovana iOS dia manoratra ny toeran'ny lohantsika amin'ny fakantsary anoloana sy dia afaka mamantatra marina tsara rehefa mihetsika isika havia na havanana.
Mifindra amin'ny menus, iOS 7 dia mifidy ireo safidy hafa ary rehefa ao amin'ilay tadiavintsika io dia atodintsika mankany ankavanana ny lohantsika hiditra izany. Azontsika atao ihany koa ny manokana ireo hetsika ireo hanombohana an'i Siri, hanokafana ny ivon'ny fampandrenesana, hanokatra multitasking, hanova ny habeny ary haka tahaka ny fikitika eo amin'ny efijery na amin'ny bokotra Home.
Ity safidy ity dia tsy manandrana maka tahaka ny fifaninanana fa mampiavaka azy manamora ny fampiasana sembana iPhone, iPad na iPod Touch ny olona manana fahasembanana fizika, zavatra izay heverin'i Apple hatrany amin'ny vokatra tsirairay avy.
Araka ny lazaintsika, ity safidy ity dia efa azo alefa ao amin'ny beta an'ny iOS 7 ary ao anatin'ny menio azo idirana izy io ary misy safidy hafa mahaliana toy ny VoiceOver na AssistiveTouch. Raha mankafy ny iOS 7 amin'ny fitaovanao ianao dia afaka manandrana mifehy ny fitaovana amin'ny lohanao ary milaza aminay izay hevitrao momba ilay safidy.
Fanazavana fanampiny - Manavao ny fampiharana amin'ny tanana amin'ny tanana iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » iOS 7 dia mamela antsika hifehezana ny iPhone amin'ny fihetsiky ny loha
Lucas Ezequiel Digilio dia hoy izy:
Sooo tena mitovy amin'ny S4
Valiny tamin'i Lucas Ezequiel Digilio
Roberto Yébenes Fernández dia hoy izy:
Mamofona fanenjehana iray hafa aho Samsung vs Apple.
Valiny tamin'i Roberto Yébenes Fernández
Carlos Alfredo T-kilaa dia hoy izy:
Ahoana ny fampitahanao izany fiasa izany amin'ny s4 dia tsy mamorona
Valiny tamin'i Carlos Alfredo T-kilaa
Yannel Uga dia hoy izy:
Inona no antsoina hoe safidy?
Valio i Yannel Uga
Jobs dia hoy izy:
Ho avy ny andro izay anehoan'izy ireo ny famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth ho zava-baovao.
Ary iza no mampiasa an'io androany? Ny tena zarain'ny olona dia ny sary sy horonan-tsary, raha toa ka mozika azon'izy ireo natao nefa tsy avelany, ka avelao ny trauma izay laninao amin'ny fanehoan-kevitra momba ny gaffecies.
Ory dia hoy izy:
manina izaitsizy aho noho ireo fanehoan-kevitra meksikana, akama a! tsara izany! tsara tokoa ny fanehoan-kevitra, LoL
ok, fa inona no antsoina hoe safidy azo idirana?
fanovana - ankapobeny - fidirana - fifehezana bokotra - bokotra….
Maikel Villar dia hoy izy:
Nahita zavatra roa izay mbola tsy hitako na novakiako n'aiza n'aiza, ny kompà raha esorinao avy eo ankavanana miankavia izy dia miseho ny inclinometera milay be ary ny faharoa: hamafa ny mailaka, naoty, multitask ... azonao atao solosaina miaraka amin'ny rantsan-tànana maro amin'ny fotoana iray hisehoan'ny bokotra mamafa
Valiny tamin'i Maikel Villar
Raha ny marina dia avy amin'ny beta 1 dia efa naneho hevitra momba izany aho. Miankina amin'ny orientation (bokotra an-trano mankany amin'ny valindrihana, mihohoka ny tarehiny) dia ilay karazana «leveler» izay miseho, mety ho bubble na tsipika io
Radioimpacto Coronel Chile dia hoy izy:
Mazava ho azy fa nadikan'izy ireo tamin'ny s4 hahahaha
Valiny ho an'ny Radioimpacto Coronel Chile
Fitsarana iray hafa ho an'i Apple nataon'i Samsung no ho avy
Jose A Cotillo dia hoy izy:
Tsy hitako na aiza na aiza io safidy io ary manana Ios7 beta 2 aho
Valiny tamin'i Jose A Cotillo
nanameloka dia hoy izy:
Mihoatra ny iray no hiafara amin'ny torticulis, ha
Valiny ho an'ny mpanameloka
Ratsy be i Apple manohy mandika an'i Samsung, tsy fantatr'izy ireo akory izay hatao mba hahatonga ny IOS ho somary manaitra kokoa, 15 andro miaraka amin'ny Android ary ankehitriny ny iPhone na ny taratasy taratasy, mahamenatra ny tsy nanao azy io teo aloha ...
nasary dia hoy izy:
ary inona no ataonao ato amin'ity bilaogy ity? Mandehana mihazakazaka amin'ny bilaogy manan-danja amin'ny android-nao, raha izy io dia hahita iray
Mamaly an'i nasario
Paoma veloma dia hoy izy:
Iza izao no maka tahaka an'iza… .. ?????? mahavariana ny fiovan'ny toe-javatra! apple tsy misy hevitra ...
Mamaly an'i Paoma veloma
ary fantatrao ny ratsy indrindra .. fa ny olona rehetra dia nanao kopia fa afaka miantso sy mandefa hafatra ianao, inona ireo bastard ehh ...
somary adala isika ehh .. ankehitriny ankoatry ny firesahana eny an-dalana fotsiny dia afaka manapaka ny tendantsika isika mba hamonjy antsika amin'ny fikasihan'ny rantsan-tanana ... tsy maintsy fantarintsika fa misy zavatra somary somary ...
(Jereo ny fanehoan-kevitra mahatsikaiky / mampalahelo etsy ambany)
Mieritreritra aho fa ho tsara ny vato toa an'i Steve Hopkins, karazana mpankafy 😛